Izitebhisi zezinja, gwema ukuhlupheka okhalweni ngalezi zinhlobo | Izinja Umhlaba
Izitebhisi zingesinye sezesekeli ezibalulekile esinazo empilweni yethu. Ukuze ukwazi ukuya phansi naphansi noma ukuphakama okuhlukile kuyadingeka ngempela. Ngakho-ke uma siya ezweni lezilwane, izitebhisi zenja babengeke basale ngemuva. Bayingxenye yezimpilo zabo, ikakhulukazi ngezikhathi ezithile ezithile.
Ngakho-ke, udinga ukwazi ukuthi yini i- izinzuzo ezivame kakhulu ukuthi bazosinikeza izitebhisi zezinja kanye nokusetshenziswa esizobanika zona futhi lapho benconywe ngokuphelele. Konke lokhu nokunye okuningi, njalo sicabanga ngokunethezeka kwezilwane zethu ezifuywayo, okuyikho okubaluleke kakhulu kithi. Unayo eyakho?
lionto ngu-dibea Ladder ...
Benoon Dog Ladder ...
Ukuphepha Koku-1 Ukuvala Ngokuzenzakalelayo...
Pawhut Ngokhuni isitebhisi ...
I-Galatee Stairs ye ...
1 Kungani Ukusebenzisa Iladi Lezinja Kulula
2 Izinzuzo zokusebenzisa iladi lenja
3 Ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwesitebhisi senja
3.1 Ngena embhedeni noma kusofa
3.2 Angene emotweni
3.3 Phuma echibini
4 Yini okufanele uyibheke lapho ukhetha iladi lenja
5 Izinja zezinja lapho kunconywa khona ukusebenzisa izitebhisi
6 Isiphambukisi senja noma iladi? Iyiphi inketho engcono?
7 Lapho ongathenga khona isitebhisi senja eshibhile
Kungani Ukusebenzisa Iladi Lezinja Kulula
Impendulo elula kakhulu, ngoba kunezilwane eziningi ezihlala usuku lonke kusuka embhedeni ziye kusofa, okwenza ukweqa okungathi ngokuhamba kwesikhathi kube yingozi empilweni yazo. Ezinye izinhlobo zinomgogodla obucayi ngempela, okuzoholela ezinkingeni ezithile noma ezifweni ezahlukahlukene. Ingasaphathwa eyokuthi amalunga nawo ahlupheka kukho konke ukugxuma. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba nosizo futhi ikakhulukazi lapho isilwane sikhula. Ngakho-ke, manje uyazi ukuthi ngesinye sezesekeli eziyisisekelo ozidingayo empilweni yakho nakulokho okwenziwe ngoboya bakho.
Izinzuzo zokusebenzisa iladi lenja
Ukuvimbela ubuhlungu emuva.
Kuzovimbela izilwane ukuthi zingagxumi ziye emuva naphambili lapho zifuna ukuyophumula.
Ngokugxuma ngakunye bangalimaza amalunga abo, okuyiladi lezinja elizovikela futhi linakekele ngalo.
Ngendlela efanayo futhi ingenye ye- izindlela ezingcono zokunakekela amathambo, ngoba yibo abalandelayo abahlushwa ukweqa okuningi, bekwazi ukuphuka ngokushesha okukhulu.
Uyazi ukuthi ukulimala okuningi kungagwenywa ngesengezo esinjengalesi?
Thuthukisa ikhwalithi yempilo yakho ngoba ngesitebhisi senja sizobe sinciphisa umzamo wakho.
Ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwesitebhisi senja
Ngena embhedeni noma kusofa
Omunye wamasiko agxile kakhulu ezinja yilawa ukukwazi ukugibela embhedeni nakusofa. Uma sikhona, bazofika begijima futhi kwesinye isikhathi, noma ngabe asikho lapho, bayazi ukuthi banendawo kuleyo ndawo. Kepha lokhu ozokwenza kuyinto ejwayelekile, okuyinto njengoba sishilo ukuthi ngeke ilungele umzimba wakho. Ngakho-ke, sizobeka iladi ukukukhombisa indlela efanele. Kuyiqiniso ukuthi ngeke bafunde kusuka osukwini olulodwa kuye kolandelayo, kepha bazokwenza ngokubekezela okuncane. Lapho sebejwayela, bazomane basebenzise iladi!
Omunye umkhuba esiwubona ezilwaneni zethu nsuku zonke ukungena emotweni. Lapho beshesha kakhulu, bangahle bangakuboni kepha kancane kancane kungabathinta kakhulu ukweqa okuningi. Ngakho-ke lapho kukhona izitebhisi. Baphelele ukukhuphuka benyuka lapho sihamba nabo. Ukusiza ukuthi uthathe izinyathelo ezifanele ngaphandle kokucindezela umzimba wakho. Futhi, ungakhathazeki uma zingcola ngoba eziningi zazo kulula ukuzihlanza.
Uma bethanda ukubhukuda echibini, bazokwazi ukuphumula ngenkathi bezivocavoca umzimba kancane futhi lokhu kuyinto eyenzekayo kubo nakithi. Kepha ngemuva kokugeza, ukuphuma kungaba yinkimbinkimbi kancane ngakho-ke, akukho okufana nokusisiza sikhuphule izitebhisi. Bayofinyeza izinyathelo zabo nabo futhi, futhi ngeke kudingeke benze umzamo ofanayo. Ngakho-ke, zonke izinzuzo okufanele uzicabangele!
Yini okufanele uyibheke lapho ukhetha iladi lenja
Inani lezinyathelo: Sifuna ukumduduza umlingiswa oyinhloko uma kukhulunywa ngokungena nokucisha kwenye indawo. Ngakho-ke, izitebhisi zenja zingaba nezinyathelo ezimbalwa. Ezinye zingaba nezinyathelo ezimbili ezibanzi, kepha ezinye eziningi zinezinyathelo ezingaphezu kwezintathu noma ezine. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ziphakeme kakhulu futhi uma sikhetha kuphela ukukhetha kwezinyathelo ezimbili, abanazo izinto ezithambile nezintofontofo futhi ziqeda. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungaqinisa khona ukweqa ngakunye.
Ukuphakama kwesinyathelo: Sishilo futhi saphinda sakuphawula lokho into enhle kakhulu ukuthi abanakho ukuphakama okuningi futhi uma kunezinyathelo eziningi. Ikakhulukazi izinja ezincane noma lezo esevele zinohlobo oluthile lwesifo. Kusukela ngale ndlela ukweqa kuzozithatha zibe ngcono kakhulu, ngaphandle kwemiphumela engaka emzimbeni wakho.
Ububanzi besinyathelo: Ngendlela efanayo nangokuya ngenani lezinyathelo, singabhekana nokuthola ububanzi bazo obuhlukile. Induduzo ikhona ngobubanzi, kepha akudingeki ukuthi kube njalo, ngoba ngosayizi ophakathi bazovumela nesilwane sethu ukuthi sihambe kahle.
Kusalindile: Kuzohlala kuncike ku- ukuma kwezitebhisi uqobo. Ngakho-ke kwesinye isikhathi singathola ukuthi omunye usalinde okuningi kunenye. Kepha empeleni uma banezinyathelo ezimbalwa, ushintsho ngeke lubonwe. Into enhle kakhulu ukuthi awukho emaweni kakhulu futhi unikeza induduzo ezifuyweni zethu kuphela.
Uma zigoqeka: Sine inketho yokukhetha ukusonga. Inzuzo yabo enkulu ukuthi singazibeka kuphela lapho sizosebenzisa zona. Ngaphandle kwalokho, bazothatha isikhala esincane kakhulu futhi sizobabeka kunoma iyiphi ikhona noma ngaphansi kombhede. Ukuze zingangeni nganoma yisiphi isikhathi lapho izilwane ezifuywayo zingasazisebenzisi.
Material: Izinkuni zingenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu kulezi zimo. Kepha ukuyenza ikhululeke kancane, kungaba njalo anezikhala ujenga noma nge velvety nesembozo, okwenza ukuthinta kwayo kube bushelelezi kakhulu. Vele, njalo ngezinyathelo ezingasheleli futhi ikhava yakho ongayigeza kahle. Vele, ngakolunye uhlangothi, unezakhiwo zepulasitiki, ezilula futhi ezingazweli ngokulinganayo.
Izinja zezinja lapho kunconywa khona ukusebenzisa izitebhisi
Ngokubanzi, ukukhuphuka nokunyuka izitebhisi akunconyelwa noma iyiphi inja. Kepha kuyiqiniso ukuthi kuzohlala kunokuhlukile. Kulokhu, singasho ukuthi zonke izinhlobo zezinhlobo ezenziwe ngemilenze emifushane nomzimba ohlangene zizodinga lokhu kufakwa nsuku zonke. Ngoba abanye bayathanda ama-dachshunds noma ama-dachshunds, ama-basset noma ama-corgi asengozini enkulu futhi lokhu kungadala inkinga ye-hip, yamathambo namalunga.
Vele nezinhlanga ezifana iLabrador noma uMalusi waseJalimane angahlupheka okhalweni kodwa ngendlela efanayo futhi nasemgogodleni. Ngoba lapho igxuma icindezelwe futhi izolayisha ngaphezu kwalokho okufanele. Uma zikhulile, zimbi kakhulu, kepha kuliqiniso ukuthi imidlwane efinyelela cishe ezinyangeni ezine nayo izodinga usizo. Zonke izindlela zokuqapha zilungele izilwane zethu!
Isiphambukisi senja noma iladi? Iyiphi inketho engcono?
Umbuzo ongunaphakade, ngoba kuwo ngaso sonke isikhathi kufanele unikeze izimfanelo eziningana ukuze wenze ukukhetha okungcono. Okokuqala, kala ukuphakama nendawo lapho izobekwa khona, noma ngabe kusofa noma umbhede futhi uma kunesikhala esanele sazo zombili izinketho. Vele, ngakolunye uhlangothi futhi okubaluleke kakhulu ukuthi, uma kwenzelwa ukuvimbela, khona-ke izitebhisi zingohlangothi lwakho. Kepha uma inja yakho inesifo noma inkinga yomzimba i-ramp ingcono ukuze ingaphoqeleli.
Ngendlela efanayo, uma kuyinja enemilenze emifushane, njengoba sishilo, i-ramp nayo ingaba ngumlingani wakho omkhulu. Uma sibona ukuthi ungakwazi ukukhuphuka ama-curbs athile lapho sehla ngomgwaqo, lapho-ke ungakhetha iladi. Njengoba ubona, Kufanele ngaso sonke isikhathi sicabange ngenduduzo enkulu yezilwane zethu kanye nokulinganiselwa kwazo uma zinakho.
Lapho ongathenga khona isitebhisi senja eshibhile
Amazon: Kungaba kuncane kanjani, i-Amazon ihlala inakho konke okudingayo futhi kulokhu bekungeke kushiywe ngemuva. Ngalesi sizathu, phakathi kwezitebhisi zezinja kuyasimangaza ngemibono yokusonga nokususwayo, ngokuqedwa okuhlukile nezinto zokwakha. Kepha njalo ngokungapheli okushelelayo.
kiwikoIsitolo sakwaKiwoko sizibophezele nasezitebhisini zezinja nokuningi, ezinikezwa ngezinyathelo ezintathu, ngoba zikwazi ukusiza izilwane zethu ezihamba phambili kakhulu. Ukufakwa kulayini uzothola induduzo eyengeziwe, ukuvikelwa nokuthamba.
Tendenimal: Izinketho ezishibhile ziyatholakala nakulesi sitolo, ngaphandle kokukhohlwa ukuthi zineziphetho ezahlukahlukene kupulasitiki noma kolayini, okusiza njalo ukukhetha okuhle kakhulu ngezitebhisi zezinja.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izitebhisi Zezinja